BUDDHIST TERMS' Dictionary: FOLLOWER OF OTHER FAITHS - အညတိတ္ထိယ
FOLLOWER OF OTHER FAITHS - အညတိတ္ထိယ
FOLLOWER OF OTHER FAITHS Aññatitthiya
အညတိတ္ထိယ - ဂေါတမဘုရားအယူမှတပါး အခြားအယူရှိသူ။
မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာပြင်ပ၌ ဘာသာရေးဂိုဏ်းများစွာရှိခဲ့၏။ ၎င်းတို့ကို အညတိတ္ထိဂိုဏ်းဟု ခေါ်သည်။
Follower of other faiths outside the Teaching of Gotama Buddha.
There were various religions sects outside the Teaching of the Buddha. They were called ‘other sects’ aññatitthiya.